Arsenal Oo La Kulantay Real Madrid Si Ay Ugala Hadlaan Heshiiska Eden Hazard.
HomeWararka CiyaarahaArsenal oo la kulantay Real Madrid si ay ugala hadlaan heshiiska Eden Hazard.
April 9, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa in ay todobaadkan la kulantay kooxda Real Madrid si ay ugala hadlaan suurtogalnimada in ay amaah ku helaan Eden Hazard .
31-sano jirkaan oo haatan ku jira xaalad ka soo kabasho ah oo looga sameeyay lugta, ayaa mar kale ku dhibtooday inuu boos ka helo Los Blancos xilli ciyaareedkan, isagoo kaliya hal gool dhaliyay iyo labo caawin 22 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Hazard ayaa wali wax ka badan labo sano uga harsan tahay qandaraaskiisa Bernabeu, laakiin kooxda Carlo Ancelotti ayaa la sheegay inay u furan tahay inay u ogolaato inuu baxo inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Sida laga soo xigtay Foot Mercato , Arsenal ayaa la kulantay Real Madrid horaantii isbuucaan si ay ugala hadlaan suurtogalnimada ‘amaah oo leh ikhtiyaar ay ku iibsan karaan’ suuqa soo socda.
Warbixinta, ayaase sheegeysa in Hazard uusan haatan ka fikireynin u dhaqaaqista Gunners, maadaama uu doonayo inuu sii joogo oo uu u dagaalamo xirfadiisa Real Madrid.
Weerar yahanka ayaa la rumeysan yahay inuu ka caga jiidayo inuu u wareego kooxaha kale waxaana uu ku qanacsan yahay inuu ku soo laaban karo qaab ciyaareedkiisii ​​ugu fiicnaa xilli ciyaareedka soo socda.